सलिन अभिनित यात्रामा रिमेक गरिएको ‘चट्ट’ रुमाल’ गित हटाउ भन्दै कस्ले र किन गरे गालि ?
ईटहरी/ पछिल्लो समय नेपालि फिल्ममा पुराना हिट फिल्मका अजम्बरी गीतहरुलाई रिमेक गरेर राख्ने ट्रेन्ट सुरु भएको छ । केहि अघि विर बिक्रम २ मा समाबेश गरिएको देउता फिल्मको ‘पिरतीको मिठो तिर्सना’ गीतलाई रिमेक गरिएर सार्बजनिक गरियो । जसले यतिबेला निक्कै वाहवाही पाईरहेको छ । यता केहि दिन अघि मात्र सलिनमान अभिनित यात्रा फिल्ममा समाबेश गरिएको ‘चट्ट रुमाल क्या मालु’ लाई पनि रिमेक गरिएको भिडियो गीत सार्बजनिक गरियो । जुन गीत पुरानो फिल्म आफ्नो मान्छेमा समाबेश गरिएको थियो । तर यो गीतले भने यतिबेला गालि र आलोचना मात्र बढि पाएको छ । अब हामि गीतमा कसले कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् ? जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दैछौ ।
सार्वजनिक गरियो नयाँ गीत “चट्ट कपाल कोरेर” – कम्मेन्ट गरे पुरस्कार ! (भिडियो सहित)
‘रुमाल धुन पर्यो‘ दुबै लोकप्रिय गायक गायिका खेम सेन्चुरी र शान्ति श्री परियारको आवाजमा मन छुने गित (हेर्नुहोस भिडियो)